Haweeney si xun loogu dilay Magaalada Burco - Awdinle Online
Haweeney si xun loogu dilay Magaalada Burco
Gabadha oo lagu Magacaabi jiray Ugbaad Cali Dhaban-loox, ayaa waxaa lagu dilay Magaalada Burco ee Gobolka ogdheer, waxaana la sheegay in dilkeeda uu ka dambeeyay Nin kamid ah dadka ku nool Magaaladaas.
Meydka Gabadha ayaa waxaa la geeyay Isbitaalka Magaalada Burco, sida uu xaqiijiyay Agaasimaha Cisbitaalka Dr Cabdi Suudi, waxaana uu sheegay in falka dilka ah ee Gabadha loo geystay uu xalay ka dhacay Magaalada Burco.
Ciidamada Booliska Magaalada Burco ayaa waxaa ay dilka, kaddib sameeyeen howlgallo, iyada ugu dambeyn la sheegay inay gacanta ku dhigeen Nin ku eedeysan falka dilka ah.
Ilaa iyo hadda lama oga waxa keenay in Ninka uu dilka u geysto Haweeneyda balse ay Ciidamada booliska baaritaan ku hayaan waxaana Ugbaad Cai la sheegay inay ahayd Hooyo saddex Carruur ah dhashay.
Previous articleWadooyin saacado u xirnaa RW Rooble & Isbitaallo uu booqday
Next articleMas’uul ka tirsan Jubbaland oo Saacado lagu xanibay Garoonka Aadan-Cadde
Wararkii uyu dambeeyay qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho
Guddi uu Magacaabay Madaxweynaha Puntland oo Go’aano culus oo saaray